Football Khabar » यसपटक कसले जित्ला च्याम्पियन्स लिग ? आयो नयाँ सर्वेक्षण
यसपटक कसले जित्ला च्याम्पियन्स लिग ? आयो नयाँ सर्वेक्षण
सिजन २०१९–२० को युरोपियन च्याम्पियन्स लिग कसले जित्ला ? अहिलेबाटै यस विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट भविष्यवाणी हुन थालिसकेको छ । यस समर सिजनमा युरोपका ठूला क्लबहरूले खेलाडीका लागि खर्चेको बजेट, टिम र इतिहासका आधारमा फुटबल पण्डितदेखि लिएर फ्यानहरूले आ–आफ्नै धारणा राखिरहेका छन् ।
हालै यस विषयमा एक नयाँ सर्वेक्षण गरिएको छ । अनलाइन भोटिङका आधारमा गरिएको सो सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार यसपटक च्याम्पियन्स लिगको प्रमुख दाबेदार इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीलाई मानिएको छ । फ्यानहरूले विगत सिजनझैं यसपटक पनि सिटीलाई नै च्याम्पियन्स लिगको सम्भावित च्याम्पियन टिमका रूपमा हेरेका छन् । सिटी गत सिजन अन्तिम आठमा टोटनह्यामसँग पराजित भएर आउट भएको थियो ।
त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना छ । बार्सिलोना गत सिजन सेमिफाइनलबाट आउट भएको थियो । तेस्रो नम्बरमा साबिक विजेता लिभरपुल छ । उसले गत सिजन फाइनलमा टोटनह्यामलाई हराएर उपाधि जितेको थियो ।
त्यस्तै, चौथोमा स्पेनिस रियल मड्रिड छ । रियल गत सिजन अन्तिम १६ बाटै आउट भएको थियो । पाँचौंमा इटालियन युभेन्टस छ । युभेन्ट गत सिजन अन्तिम आठबाट आउट भएको थियो ।
छैटौंमा फ्रेन्च क्लब पिएसजी छ भने साँतौंमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिख रहेको छ । नवौं नम्बरमा भने स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिड रहेको छ ।
प्रकाशित मिति १५ श्रावण २०७६, बुधबार ०६:५६